ဦးခင်ညွန့် ပြည်ပ မီဒီယာတွေ နှင့် တွေ့ ဆုံရင် ပြန်ဖမ်းမည်
ဦးခင်ညွန့် လူဝတ်လဲပြီး တွေ့ ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်)
ယခင် စစ်အစိုးရက ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်အနေနဲ့
ပြည်ပမီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပါက ခံဝန်ကတိဖေါက်ဖျက်မှုဖြင့် ပြန်လည်
အကျဉ်းကျခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ
အမည်မဖော်လိုသူ ရဲမှူးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွှတ်ပေးခဲ့စဉ်အခါက ပြည်ပ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မပြုရန်၊ တပ်မတော်နှင့် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ အတွင်းရေးသတင်းများကို မည်သည့်အခါမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မပြုရန်၊ စည်းကမ်းချိုးဖေါက်ပါက ကျန်ရှိ ထောင်ဒဏ်များကို ပြန်လည် ကျခံရမည်ကို သိရှိပါကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာ ကနေဒါရောက် မြန်မာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမြင့်ဆွေ ရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ဒီပဲယင်း
အရေးအခင်းအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့တွေက ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး ဦးခင်ညွန့်က ပြောဆိုတယ်လို့ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူးကြီး ၀င်းနိုင်ထွန်း က သွားရောက် စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီ့ အချိန်က ရဟန်းဘောင်ဝင်နေတဲ့ ဦးခင်ညွန့်က ဦးမြင့်ဆွေကို သတင်းထောက်တစ်ယောက် အနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ သုတေသီ တစ်ဦးအနေနဲ့သာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း၊ တွေ့ဆုံပြောဆိုမှုတွေကိုလည်း မည်သည့်မီဒီယာတွင်မှ ရေးသားဖော်ပြခြင်း မပြုရန် ကြိုတင် သဘောတူညီချက် ရယူခဲ့ကြောင်း၊ ဒီပဲယင်းကိစ္စလည်း မပြောကြောင်း စသဖြင့် ရှင်းပြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
4/19/2012 05:57:00 PM
မင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအမည် အသုံးပြု၍ ငွေကျပ်ကိုးသိန်းလိမ်လည်
မင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ၏ အမည်များကိုအသုံးပြု၍ ငွေကျပ်ကိုးသိန်းလိမ်လည်မှုတစ်ခု
တောင်ငူတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ နည်းလမ်းဖြင့် တောင်ငူမြို့ "စည်ပင်ဂိုဏ်းအုပ်ကျောင်း" ဆရာတော် ဦးဥာဏိဿလင်္ကာရထံမှ ကျပ်လေးသိန်းတစ်ကြိမ်၊ ငါးသိန်းတစ်ကြိမ် လိမ်လည်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဆရာတော်၏ တိုင်တန်းချက်ကြောင့် လိမ်လည်သူငါးဦးကို တောင်ငူရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ပြီး၊ လိမ်လည်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ကားကိုလည်း ယင်းရဲစခန်းတွင်ပင် သိမ်းဆည်းထားကြောင်းသိရသည်။ ယင်းလိမ်လည်သူတို့ကို ယခုလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
4/19/2012 05:19:00 PM
စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုအားလုံးကို တနှစ် ရပ်ဆိုင်းဖို့ အီးယူနိုင်ငံတွေက မူအားဖြင့်သဘောတူ
လက်နက်ရောင်းချမှုကလွဲယင် မြန်မာအစိုးရပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုအားလုံးကို တနှစ် ရပ်ဆိုင်းဖို့ အီးယူနိုင်ငံတွေက မူအားဖြင့်သဘောတူလိုက်ကြောင်း AFP သတင်းအရ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်ရှိ အိးယူသံတမာန်တဥိးက မြန်မာအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်လုပ်မလုပ်ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာမို့ လောလောဆယ် တနှစ်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဧပရယ်လ ၂၃ ရက် Luxembourg မှာလုပ်မဲ့ အိးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပုံမှန်လပတ်အစည်းအဝေးမှာ
တရားဝင်ကြေငြာဖို့ ရှိကြောင်းလည်း ရန်ကုန်ရှိ အိးယူသံတမာန်တဥိးကို ကိုးကားပြိး AFP သတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးယန်းငွေ ဘီလျံ ၃၀၀ ကို ပယ်ဖျက်ပေးမည်
ဂျပန်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးယန်းငွေ ဘီလျံ ၃၀၀ ကို ပယ်ဖျက်ပေးမဲ့အကြောင်း ဧပရယ်လ ၁၉ ရက်ထုတ် Asahi Shimbun သတင်းစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ အဲဒီငွေပမာဏဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒဿမ ၇ ဘီလျံနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို လာမဲ့စနေနေ့ တိုကျိုမှာ မြန်မာသမ္မတ ဥိးသိန်းစိန်နဲ့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Yoshihiko Noda တို့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ တရားဝင် ကြေငြာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြွေးတွေလျှော့ပေးပြီးတဲ့နောက်
မှာ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်တွေကို ပြန်စမဲ့အကြောင်း လည်း Asahi Shimbun သတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
4/19/2012 04:44:00 PM
NLD ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် တက်ရေး ဆုံးဖြတ်ရန် ရက်ထပ်မံ ရွှေ့ ဆိုင်း
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၉ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် စတင်မည့် လွှတ်တော် အစည်း အဝေး များသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် မည်၊ မတက် ရောက်မည်ကို ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မည် ဟု သတင်း ထုတ်ပြန် ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း
ထပ်မံ ရွှေ့ ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုံးကြိုင်က ပြောကြားသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရမည့် စာပုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ပေးရန် NLD က သမ္မတရုံးသို့ အကြံပြုလွှာ ပေးပို့ထားပြီး NLD ပါတီ၏ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် ယင်းကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်နေကြောင်း၊ ဦးဥာဏ်ဝင်း ပြန်လာ ပြီးမှသာ ယင်းကိစ္စကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ များတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကတိ သစ္စာပြုချက် နည်းဥပဒေ ၅(ဂ)နှင့် ၉(က)တွင် "ကျွန်ုပ်…..သည်လွှတ်တော် ကိုယ်စား
လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံရပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ ကိုလည်း လိုက်နာပါမည်"ဟု ဖော်ပြထားသည်။
4/19/2012 04:38:00 PM
တားမြစ်ထားသော်လည်း သင်္ကြန်တွင် အရက်ဘီယာဈေးကွက် အထမြောက်ခဲ့
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁၅ရေကစားမဏ္ဍပ်များအနီး အရက်ဘီယာရောင်းချမှုများကို ရုပ်သံမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရက တားမြစ်ထားသော်လည်း ရောင်းချမှုများ ရှိခဲ့ သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများကို ရေသန့်အအေး နှင့်ရော၍လည်းကောင်း၊ သီးသန့်လည်းကောင်း ရောင်းချနေသည့်အပြင် ကားများဖြင့်လှည့်လည် ရောင်းချခဲ့သည်။”တားမြစ်ထားတယ် ဆိုပေမယ့် ရောင်းလို့ရပါတယ်။ ဈေးကောက် လာကောက်တာတော့ ရှိတယ်”ဟု ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းတွင် ဘီယာရောင်းချသူ တစ်ဦးက ပြော သည်။အရက်ဘီယာ ရောင်းချသူများသည် ဈေးကောက်လာကောက်သူများကို အခြားပစ္စည်းများထက် နှစ်ဆခန့်ပိုပေးခဲ့ရကြောင်း ဈေးရောင်းချသူများထံမှ သိရသည်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ကာလတွင် အရက်ဘီယာရောင်းချမှုကို တားမြစ်ထားသော်လည်း ရောင်းချမှုများမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်ကာလ၏ အရောင်းရဆုံး ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မဏ္ဍပ်များတွင် အရက်ဘီယာနှင့် ပတ်သက်သော ကြော်ငြာပိုစတာများ ကပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသော်လည်း အများဆုံးတွေ့ရှိ ခဲ့ရ သည်။ကြည်ငြိမ်းသော် (ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်)
4/19/2012 04:18:00 PM
“ သာဓုပါဗျာ “ သံချပ် (အသံဖိုင်)
ကိုမေတ္တာ၊ ကိုကုသိုလ်၊ ကိုအရိုင်း၊ ကိုဗေလုဝတို့ပါဝင်တဲ့ "သာဓုပါဗျာ" သံချပ်အဖွဲ့ ရဲ့သံချပ် (၂၀၁၂ ခုနှစ်) နားသောတဆင်နိုင်ပါပြီ။ Niknayman
4/19/2012 09:44:00 AM
Interview with minister U Aung Min - ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း နှင့် အင်တာဗျူး (ရုပ်/သံ)
အော်စလိုမြို့ရောက် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း - နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ကို ဒီဗွီဘီ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးအေးချမ်းနိုင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်..
4/19/2012 09:39:00 AM
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းမှာ အခုတလော ၀က်သက်ရောဂါတွေ အဖြစ်များနေပြီး သေဆုံးတာလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးဝါးနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကူအညီတွေ အများကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ ဒုက္ခသည်စခန်းက တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဗန်းမော်မြို့ ရောဘတ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းဝင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ အခုလအတွင်း ကလေးနဲ့ လူငယ်တွေအပါအ၀င် လူဦးရေ ၃၀၀ ကျော်လောက် ၀က်သက်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ အကြောင်း အဲဒီဒုက္ခသည်စခန်းက ကော်မီတီဝင်
တစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။ "ဆရာဝန်တွေမရှိဘူး အရင်တုံးကတော့ ကမ့်ကို ဆရာဝန်တွေ လွှတ်ပေးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ တောင်ပေါ်က ဆေးသင်တန်း တက်ထားတဲ့ ဆရာမတွေပဲ ရှိတာ။ အခုဆေးကုနေတာက ဒုက္ခသည် စခန်းကပဲ ၀ယ်ထားတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ကုနေရတာ။ ကျနော်တို့ကလည်း လူက ၂၀၀၀ ကျော်တယ်။ ကမ့်မှာရှိတဲ့ ဆေးဝါးလောက်နဲ့ပဲကုသပေးနိုင်တယ်။ အခြေအနေ ဆိုးရွားလာတဲ့အခါ ဆေးရုံပို့တဲ့ အခါကျတော့ မထောက်ပံ့နိုင် တော့ဘူး။" ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗန်းမော်ဆေးရုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်တဲ့ အခါ တာဝန်ကျဆရာမတစ်ဦးက သူတို့ဆီကို ဒုက္ခသည်စခန်းက ၀က်သက်ရောဂါနဲ့ ရောက်လာတဲ့ လူနာ ၆ ယောက်လောက်ရှိပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းကို ဆရာဝန်တွေမသွားနိုင်တာဟာ သင်္ကြန်ကာလ ဖြစ်နေလို့ မကြာခင် သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗန်မော်မြို့ ရောဘတ် ခရစ်ယာန် ကျောင်းဝင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၂၃၀၀ ကျော်ရှိပြီး နှစ်၂၀၀၀ စခန်းနဲ့ဆိုပါက စုစုပေါင်း ဒုက္ခသည် ၄၀၀၀ လောက်ရှိပြီး သူတို့ဟာ မံစီမြို့နယ်နဲ့ မိုးမောက်မြို့နယ် အတွင်းက ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျမ်းသစ္စာစကားရပ် ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မျှော်လင့်
လာမယ့် ဧပြီလ ( ၂၃) ရက်နေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုတဲ့အခါ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည် ဆိုတဲ့ စကားရပ်အစား လေးစားလိုက်နာပါမည် လို့ မပြင်ဆင်သေးသရွေ့၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော် မတက်နိုင်သေးကြောင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖေါ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာအက်အေ ရဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်း ကဏ္ဍ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တာကတော့ - "ဒီလိုပါ။ လွှတ်တော်မတက်ဘူးလို့ ကျမတို့က ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကျမ်းသစ္စာဆိုပြီးမှ လွှတ်တော်တက်မယ်။ ဒီ ကျမ်းသစ္စာမှာ ဒီစကားပြောင်းဖို့ ဆိုတာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေထဲက စာသားအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခက်အခဲ မရှိဘူးလို့တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။" ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို ကော်မတီဝင် ဦးဥာဏ်ဝင်း ဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော် ကို သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အစိုးရအဖွဲ့တွင်းနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားသူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အပြောအဆိုတွေ ပေါ်ပေါက်နေတာ ကြောင့် လွှတ်တော်တွင်း ၀င်ရောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲလို့ အာအက်အေက မေးမြန်းရာမှာ - "ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ဘာဖြစ်လို့ မလိုလားလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကျမတို့
ပထမ အဖြေရှာဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အကြောင်းတော့ ရှိရမှာပေါ့။
ဒီအကြောင်းကို မသိဘဲနဲ့ ဒီဟာကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာ ပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားတယ် ဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးမျိုးသော အမြင်တွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်ခွင့်ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ ဒါမှလည်း ဘယ်လို အဖြေတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရှာလို့ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လို့ ရမှာပါ။" ဒါ့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ လူငယ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ကြီးကြီးမားမားရှိနေကြောင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ကျေးဇူး ကလည်း အတော်ကြီးကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
4/19/2012 09:12:00 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပြည်ပ ခရီးစဉ် အမေရိကန်ကြိုဆို
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ (၂၄) နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီး စတင်မယ့်အပေါ် အမေရိကန်အစိုးရ က ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လာမယ့်ဇွန်လအတွင်း နော်ဝေး နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံကို ခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ထား ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကို ဦးဆုံးသွားမလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Mr. Mark Toner က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့တုန်းကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လာရောက်လည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နော်ဝေးကိုဦးဆုံးသွားရောက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ ကိုယ်တိုင် လာရောက်လက်ခံယူမှာ ဖြစ်တယ်လို့ နော်ဝေးနိုင်ငံကပြောပါတယ်။ အလားတူ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်း အမြင့်ဆုံး အရပ်သားဆု ဖြစ်တဲ့ ကွန်ဂရက် ရဲ့ရွှေတံဆိပ် ဆု လက်ခံဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာန အကြီးအကဲ မစ္စတာမိုက်ကယ် မွန်တက်စာနို က အခုလို ပြည်ပခရီးစဉ် အစီအစဉ်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းပြည်ကို ပြန်လာခွင့်ပြုလိမ့်မယ် ဆိုတာ ယုံကြည် စိတ်ချရပြီလို့ အထင်အရှားပြသလိုက်တာပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ထပ် တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ် လည်း ဖြစ်ပါတယ် လို့ပြောဆိုပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရဟာ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ကိုလည်း လာမယ့် မေလမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကို လာရောက် လည်ပတ် ဖို့ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ဟာ ကုလသမဂ္ဂ ကို လာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ အခုလို အမေရိကန်အစိုးရက ဖိတ်ကြားတာဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
4/19/2012 09:11:00 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပတ်စ်ပို့လျောက်ထားတာ ခုချိန်ထိ မရရှိသေး
Photo (Education Digest)
သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ ပတ်စ်ပို့လျောက်ထားတာ ခုချိန်ထိ မရရှိသေးကြောင်း
အဖွဲ့ချုပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းကို ကိုးကားပြီး ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ အေအက်ပီသတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဘရစ်တိန်ဝန်ကြီးချုပ်
ဖိတ်ကြားချက်အရ လာမဲ့ဇွန်လမှာ နော်ဝေနဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ
တွေဆီ သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အမည်မဖေါ်လိုတဲ့ အစိုးရအရာရှိတဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အနဲဆုံး ပြည်ပနိုင်ငံ ၃-ခုကို သွားရောက် လည်ပတ်မဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ အေအက်ဖ်ပီသတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီဗွီဘီ (Facebook) သစ်ထူးလွင်
4/19/2012 08:43:00 AM
လှိုင်သာယာတွင် ရေကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း သေနပ်ကျည်ဆံများတွေ့ရှိ
ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့၂၀၁၂ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက လှိုင်သာယာတွင် ရေကန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင်း သေနပ်ကျည်ဆံများတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့နံနက် ဆယ်နာရီခန့်က လှိုင်သာယာ၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ FMI အနီးရှိ အများပြည်သူသုံး စိမ်းမြကန်သာ သောက်ရေကန်အား ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဦးဆောင်ကာ ရာအိမ်မှူး၊ဆယ်အိမ်မှူးများနှင်
့ ရပ်ကွက်ပြည်သူများက ကန်တွင်းရှိအမှိုက်သရိုက်များကို
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင် ဆယ်အိမ်မှူးက ရေကန်ထဲဝယ် ကျည်ကပ် ၂၅ ကပ်နှင့် ကျည်တောင့်စုစုပေါင်း ၂၀၇ တောင့်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုကျည်များအားး မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လှိုင်သာယာရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ လာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီး၊ လှိုင်သာယာရဲစခန်းဝယ် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
4/19/2012 08:18:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအရ ပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အလားအလာတွေ ရှိနေပေမဲ့ သတိထားစရာတွေ အများအပြား ရှိနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ၊ တာဝန်ခံ မှုတွေနဲ့အတူ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုတွေကို ခွဲဝေခံစားနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးဖို့ လိုမယ်လို့ ၀ါရှင်တန်မြို့တော် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးချုပ်
နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှာ ပြောသွားကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပြန်လည် ထိတွေ့ဆက်ဆံရာမှာ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးကြတဲ့ အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး
တိုးတက်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေကို ပြောခဲ့ကြသလို သတိထားရမယ့် ပြဿနာတွေ အများအပြား ရှိနေတာကိုလည်း ထောက်ပြလိုက်ကြတာပါ။ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ နိုင်ငံ တကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ မြန်မာ့ အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေကို နှီးနှောဖလှယ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အထဲက မြန်မာ့စီးပွားရေး အခြေအနေကို တစိုက်မတ်မတ် စောင့်ကြည့်
အကဲခတ်နေတဲ့ သြစတြေးလျနိုင်ငံ Macquarie တက္ကသိုလ်က စီးပွားရေးပညာရှင် ပါမောက္ခ Sean Turnell ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အခြေခံကျကျ အပြောင်းအလဲတွေ လိုအပ်နေတာလို့ ပြောခဲ့တာပါ။“လတ်တလောရှိနေတဲ့
ဥပဒေတွေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ဦးစားပေးရ
လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေ အတော်များများဟာ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက ရှိနေတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မဖယ်ရှားခင်မှာလည်း လုပ်ဖို့လိုတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးအရ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိဖို့ပါ။ ဒါမှလည်း လူတွေ စီးပွားရေး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်၊ စိတ်ချလက်ချ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နိုင်ကြပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီထဲက တချို့ဟာ လုပ်မယ်ဆိုရင် သိပ်လည်း မခဲယဉ်း ပါဘူး။ ငွေကြေးလည်း ကုန်ကျစရာ မလိုသလို အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်တွေတောင် တက်လာ ဦးမှာပါ။ ကျနော်တို့ ပြောနေတာက အစိုးရကနေ အကုန် လျှောက်လုပ် နေတာတွေကို ရပ်ဖို့ပါ။”စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အနက် အထင်ရှားဆုံး အဖြစ်နဲ့ကတော့ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့ ငွေလဲနှုန်းကို ဧပြီလဆန်းပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်တာကို ဆွေးနွေးသူတွေ အသိအမှတ်ပြု ပြောခဲ့ကြပေမဲ့လည်း
ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေအောက်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်တယ် လို့လည်း သတိပေးခဲ့ကြတာပါ။
နှုန်းရှင်အဖြစ် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်တဲ့စနစ်မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သလို ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းတွေက လိုင်စင်ထုတ်ပေးရာမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတာတွေကိုလည်း တွေ့နေရတုန်းပဲလို့ ပြောကြပါတယ်။စီးပွားရေး
ပညာရှင် တာနဲလ် ကတော့ ဘယ်အပိုင်းတွေမှာ ငွေကြေးသုံးစွဲနေသလဲ ဆိုတာတွေကို ခြေရာခံ ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ အကြံပြုခဲ့ တာပါ။ ဘဏ္ဍာရေး ရ/သုံးမှန်းခြေကို နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း လွှတ်တော်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်နိုင်တာမျိုးဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ခြေလှမ်းကောင်းတရပ် ဖြစ်ပေမဲ့လည်း
စစ်တပ်အတွက် အသုံးစရိတ်တွေ လျော့မလာဘဲ တခြား အရေးကြီးတဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာတော့ လိုအပ်ချက်ထက် နည်းပါးနေတာတွေဟာလည်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေလို့ ပါမောက္ခ တာနဲလ်က ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရကတော့ စီးပွားရေးမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးမယ်လို့ ကတိပေးပြီး တဲ့နောက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ အကူအညီတွေ တောင်းခံလာရာက ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ ချီပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အဆက်အဆံမရှိခဲ့တဲ့ IMF ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ ADB တို့လို ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ မကြာသေးခင် နှစ်တွေကစလို့ ပြန်လည် ထိတွေ့ ဆက်ဆံလာကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက လက်တွေ့ အခြေအနေတွေကို အကဲဖြတ်ဖို့၊ အစိုးရကို အကြံပေးဖို့နဲ့ အနာဂတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာတွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလကစလို့ ADB နဲ့ IMF တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ပင်တိုင် ဆွေးနွေးသူ တဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့က မခင်ဥမ္မာက ပြောပါတယ်။"ကျမတို့မြင်တာက
အခုလို ဘဏ်တွေပေါ့နော်- နိုင်ငံတကာက ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွေ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွေ၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တွေက ဝင်လာမယ်ဆိုရင် သူတို့ကလည်း သူတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ငွေထုတ်ကြီး ပိုက်လာပြီးတော့မှ ကျမတို့ပြည်သူတွေကို ရေတွင်းတူးမလား၊ မြောင်းဖောက် မလား၊ ကျောင်းဆောက် မလားဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျမတို့ပြည်သူတွေ လိုချင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပြည်သူ့ဆီ က မှန်ကန်တဲ့အသံ ကြားဖို့အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးရမယ်။"မြန်မာနိုင်ငံမှာ
မကြာသေးခင် အချိန်တိုအတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ အပေါ်မှာတော့ နိုင်ငံ တကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက အားတက်စကား ပြောခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုတွေ၊ တာဝန်ခံမှုတွေ ရှိဖို့လည်း လိုမယ်လို့ သတိပေးခဲ့ကြတာပါ။ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်ရောက်လာနိုင်မယ့် မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ရှိနေတာမို့ ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ၀င်လာတဲ့ အခါ ဒေသခံ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် နစ်နာမှုတွေ မဖြစ်ရလေအောင် အစီအမံတွေ လည်း လိုမယ်လို့ ဆွေးနွေးသူတွေက တညီတညွတ်တည်း ပြောခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
By အောင်လွင်ဦး (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း)
4/19/2012 07:58:00 AM
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ငါးရက်ကြာခရီးသွားရောက်မည်
ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Koichiro Gemba နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် နေပြည်တော် မှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က
မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် လာမည့်သောကြာနေ့ (ဧပြီ ၂၀) တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ငါးရက်ကြာခရီးသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက သတင်းဌာန များသို့ပြောကြားသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ယိုရှီဟီကိုနိုဒါနှင့် ၂၂ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံကြမည်
ဖြစ်ပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြ ဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း အထက်ပါတာဝန်ရှိသူကပြောသည်။ ဦးသိန်းစိန်၏ ဂျပန်ခရီးစဉ်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၈ နှစ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရ၏ အဆင့်မြင့်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး သွားရောက်သော ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။
4/19/2012 07:01:00 AM
ရန်ကုန်သင်္ကြန် ယာဉ်မတော်တဆမှု ၄ ဦးသေ၊ ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ
မဟာသင်္ကြန် အကြတ်နေ့ (ပထမရက်) ရန်ကုန်မြို့တော် မြင်ကွင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် လူ၎ ဦးသေဆုံးကာ ၁၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ထံမှစုံစမ်း သိရသည်။
ရေကစားရာမှ ဖြစ်ပွားသောယာဉ် မတော်တဆမှုမှ ဒါဏ်ရာရသူ ၅၀ ဦး၊ ပုံမှန် ယာဉ်တိုက်မှုမှ သေဆုံးသူ ၄ ဦး၊ ဒါဏ်ရာရသူ ၅၆ ဦး စုစုပေါင်း ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ၄ ဦး သေဆုံး၊ ဒါဏ်ရာရသူ ၁၀၆ ဦး ရှိခဲ့ ကြောင်း ယင်းဌာန စာရင်းများအရ သိရသည်။ ၂၀၁၁ခုနစ် သင်္ကြန်ကာလတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု ၃၂ ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ
၅ ဦး ဒါဏ်ရာရသူ ၆၉ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနစ်သင်္ကြန်ကာလတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု မှာ၂၁ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၅ ဦး ဒါဏ်ရာရသူ ၃၃ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း ယင်း ဌာနမှ ဆက်လက် သိရှိရသည်။
4/19/2012 06:52:00 AM
NLD ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် တက်ရေး ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်မည်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင် ရရှိခဲ့ ကြသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါ အဝင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် စတင်မည့် လွှတ်တော် အစည်း အဝေး များသို့ တက်ရောက် မည်၊ မတက် ရောက်မည်ကို မနက်ဖြန်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချ မှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း NLD ၏ မန္တလေးတိုင်း မဟာ အောင်မြေမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင်က The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။ "နက်ဖြန် မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၀ နာရီအထိ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တွေကို NLD ရုံးချုပ်မှာ အစည်း အဝေး ခေါ်ထားတယ်။ အဲဒီတော့မှ ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှာ"ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ဧပြီလ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း က တယ်လီဖုန်းမှ တစ်ဆင့် ပြောဆိုသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရမည့် စာပုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ပေးရန် NLD က သမ္မတရုံးသို့ အကြံပြုလွှာပေးပို့ထားပြီး ယင်းပါတီ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဧပြီလ ၂၃ ရက် တွင် စတင်ကျင်းပမည့် လွှတ်တော် အသီးသီးသို့ တက်ရောက်ရေးမှာ မသေချာမှု များရှိနေချိန်တွင် ၄င်းက ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်
တက်ရောက်ရမည့် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများကို အကြောင်း ကြားထားကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရုံးအဖွဲ့ ၏ ညွှန်ကြား ရေးမှူး တစ်ဦးက ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင်
The Voice Weekly သို့ ပြောကြား ထားသည်။ လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ များတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကတိ သစ္စာပြုချက် နည်းဥပဒေ ၅(ဂ)နှင့် ၉(က)တွင် "ကျွန်ုပ်…..သည်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံရပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်
စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ ကိုလည်း လိုက်နာပါမည်"ဟု ဖော်ပြထားသည်။
4/19/2012 06:46:00 AM
ဧပြီလအစောပိုင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ အထင်ကရ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နောက်ပိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်ပြီး ဖြစ်လာအောင် တွန်းအားပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် နှစ်ရှည်လများ ချမှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထဲက တချို့ကို အမေရိကန်က ဒီတပတ်အတွင်း လျှော့ပေါ့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ဘုရားကျောင်း အပါအ၀င် ဘာသာရေး အဆောက်အဦးတွေ
နဲ့ မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာ စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမည်ခံ အရပ်သားအစိုးရ ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလကတည်းကစလို့ မြန်မာအစိုးရကို အထီးကျန်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ နှစ်ရှည်လများစွာ မူဝါဒတွေကနေ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့အညီ တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ရုပ်သိမ်းပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒကို အမေရိကန် အိုဘားမား အစိုးရက ပြောင်းလဲ ချမှတ်လာခဲ့တာပါ။ ဆယ်စုနှစ်
နှစ်ခုကျော်ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အချိန်ပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ့် သံအမတ်ကြီးအဆင့် ခန့်အပ်ဖို့လည်း အမေရိကန်အစိုးရက စီစဉ်ထားပါတယ်။ တချို့သော မြန်မာအစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့ လွှတ်တော်အမတ် တချို့ကိုလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လာရောက် လည်ပတ်ခွင့် ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်က ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေအပေါ် ယခင် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုတွေနဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို
စစ်အစိုးရက ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာအစိုးရကို လက်နက်ရောင်းချမှု ပိတ်ပင်ခဲ့သလို အကြီးတန်း မြန်မာအစိုးရ အရာရှိတွေ အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ပိတ်ပင်မှုတွေ ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက သွင်းကုန်တွေကို တားမြစ်တဲ့ Burmese Freedom and Democracy Act ဥပဒေကို အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က ပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေ၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအပါတွေကို အမေရိကန်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို သုံးစွဲခွင့် ပိတ်ပင်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုတွေကိုတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ အဲဒီအချိန်က သမ္မတ George
W. Bush ရဲ့ အမိန့်နဲ့ ချမှတ်ခဲ့သလို ကန့်ကွက်ခံရသူတွေရဲ့ စာရင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ထပ်တိုးခဲ့ပါတယ်။
By မခင်ဖြူထွေး (ဗွီအိုအေ-မြန်မာပိုင်း) သစ်ထူးလွင်
4/19/2012 06:26:00 AM
မြန်မာကာစတန်များ ကုန်ကားတစ်စီး ငွေကျပ် ၅ သောင်း တောင်း
တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် ကျယ်ဂေါင် - မူစယ်အဝင်အထွက် ဂိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည့် မန်ဝိန်းဂိတ်တွင် မြန်မာအကောက် အခွန်ဝန်ထမ်းများမှ ကုန်ကားတစ်စီး အနည်းဆုံး ကျပ်ငွေ ၅ သောင်း တောင်းယူနေကြောင်း ကုန်သည်အသိုင်းအဝိုင်း အဆိုအရ သိရသည် ။
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင်ဂိတ်
အခွန်ဆောင်ထားသော ကုန်ကားများ တရုတ် ကျယ်ဂေါင်ဘက်မှ မူစယ်ဘက်သို့ ၀င်ရောက်ရာတွင် မန်ဝိန်းဂိတ်တာဝန်ကျ အကောက်အခွန်ဝန်ထမ်းများမှ မလိုအပ်ပဲ ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီး ငွေတောင်းယူနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖေါ်လို သူ ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုသည် ။“မန်ဝိန်းကာစတန်ပေါ့နော် အခွန်ဆောင်ပြီးသား ဂျူတီနဲ့ထွက်တဲ့ ကုန်တင်ကားတွေကို သွားလို့မရအောင် ခုံတန်းကြီးချ ထားပြီးတော့ ဖွင့်ဖေါက်စစ်ဆေးတယ် ပိုက်ဆံတောင်းတာ အနည်းဆုံး ၅ သောင်းပေါ့နော်” ဟု သူက ဆိုသည်။မူစယ် ၁၀၅ မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၌သာ ကုန်စစ်ဆေးရေးဂိတ် အဓိကနေရာ အဖြစ်ထားရှိသည့် အတွက် မန်ဝိန်းဂိတ်တွင် စစ်ဆေးရန် မလိုအပ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည် ။“အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို တောင်းယူပြီး ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ တိုက်ကြည့်တာပေါ့နော်။ ကားတွေကို မိုးကာ လှန်ပြီးဖွင့်ဖေါက် စစ်ဆေးတာပေါ့နော်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် မန်ဝိန်းက ကုန်စစ်ဆေးတဲ့ ချက်ပွိုင့်မဟုတ်ဘူးလေ ။ တကယ်လို့ အဲဒီပိုက်ဆံ ၅ သောင်းပေးတယ်ဆိုရင်တော့ မစစ်ဘူးပေါ့ ” ဟု ဆိုသည် ။၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်းက တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများတွင် တာဝန်ကျသည့် ကာစတန်ဝန်ထမ်း အများစုကို လာဘ်စားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကာစတန်ဌာနကို ပြန်လည်အသစ်ဖွဲ့စည်း ထား ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။ယခင်က ကာစတန်ဌာနကို နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်း၌ သီးခြား တာဝန်ချထားခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။
4/18/2012 06:26:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွေအတွက် အထောက် အကူ ဖြစ်စေမယ့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကို ခွင့်ပြုတာလို အရေးယူဒဏ်ခတ်မှု တချို့ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လျှော့ပေါ့ပေးသွားမယ်လို့ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) သစ်ထူးလွင်
4/18/2012 06:07:00 PM
17.4.2012 မြန်မာနှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့တွင် မြိတ်မြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်များမှကြီးမှုးကျင်းပသောပထမအကြိမ်မြောက်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကို ယင်းနေ့ညနေ (၃)နာရီအချိန်တွင်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၄င်းအခမ်းအနားတွင်ပူဇော်ခံအဖိုးအဖွားများမှာအသက် (၇၅)နှစ် အထက်ရှိသောနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးများကိုဂါရ၀ပြုပူဇော်ကန်တော့ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုးဖွားများအားလုံး အမျိုးသား(၁၁)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး(၁၂)ဦး ပေါင်း၂၃ ဦးတို့ကိုလှူဖွယ်ပစ္စည်းများနှင့်် တကွ ဂါရ၀ပြုကန်တော့ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားစတင်
သည်နှင့် သံဃာတော်များမှအန္တရယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပေးပြီး အခမ်းအနားကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက်ဖိုးဖွားများကို ကန်တော့ကြပြီးဖိုးဖွားများမှ ဆုတောင်မေတ္တာများပို့သ ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက် အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာသောဧည့်သည်တော်များအား ဆီထမင်း၊လဘက်ရည်နှင့် အအေးများ ဖြင့်ဧည့်ခံကျွေးမွေးကာအခမ်းအနားကိုညနေ (၄)နာရီခွဲ ခန့်တွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
4/18/2012 05:24:00 PM
သင်ခန်းစာများယူသင့်သည့် လားရှိုးမြို့က သက်သာဆိုင်ခန်းမီးလောင်မှု
မန်ဆူဘုရားကြီး သက်သာရန်ပုံငွေဆိုင်ခန်းမှ မီးအားမြင့် စက်၏အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ခန်းနေလူ ၂ ဦးသေဆုံးရမှု မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွား သည်။
ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းမှာ သေဆုံးသူ ရဲလင်း ထွန်း(ခ) ကုလား (၃၀နှစ်) နှင့် မရှိုးပန်း အိမ်(ခ) မေရှိုးတို့သည်လက်ထပ်မင်္ဂလာ ပွဲကျင်းပပြီး အိမ်ထောင်သက်(၁)လနှင့် (၃)ရက်သာရှိပြီး မန်ဆူဘုရားကြီးသက် သာဆိုင်ခန်းအမှတ်
(၈)တွင် ငှားရမ်းကာ စံချိန်ဦးစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဝမ်းကြောင်း နေထိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားသော မတ် လ ၂၀ ရက် နံနက် ၁ နာရီ မိနစ် ၄၀ (မတ်လ ၂၁ရက်)တွင် အိပ်ခန်းပြုလုပ် ထားသော အကျယ် ၁၀ပေ ရှေ့နောက် အလျား ပေ ၂၀ မှ နောက်ပိုင်းတွင် နှစ် ယောက်ကုတင်တစ်လုံးထားနိုင်ရုံမျှ အိပ် ခန်းကိုသုံးထပ်ပြားကာရံ အခန်းဖွဲ့နေသည် ဖြစ်ရာ အိပ်ခန်းအပြင်တွင်ဆိုင်ခန်းသုံး မီးအားမြင့်စက်ထားရှိသည်။ ထိုမှမီးအား မြင့်စက်အပူလွန်ကဲပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်း သည်။
မီးစတင်လောင်ကျွမ်းချင်းပင် အိပ်ခန်းကာရံထားသော သုံးထပ်သားနံ ရံကိုလောင်နေပြီဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းအပြင် ရှိဆိုင်အတွင်း ရရာနေရာတွင် မော်တော် ဆိုင်ကယ်၊ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်ရာတွင် အသုံးပြုသောစားသုံးဆီ၊ မီးဖိုဂတ်စ်အိုး များကြောင့် မီးလောင်မှုကိုတိုးမြှင့်အား ကောင်းစေပါသည်။
တစ်ခုတည်းသော ဆိုင်ခန်းရှေ့မျက် နှာစာမှ အလူမီနီယံအထက်/အောက်တင် ချ လိပ်တံခါးသာရှိပါသည်။ ဘယ်ညာ အခြားဆိုင်ခန်းများရှိ၍ ပြုတင်းပေါက်မ ရှိပါ။ အနောက်ပိုင်း (အိပ်ခန်းဖွဲ့ထားသော နောက်ခြမ်း)တွင်လည်း ပြုတင်းပေါက် လုံးဝမရှိ၊ လှောင်ပိတ်သောခန်းဖွဲ့မှုစနစ် ရှိနေသည်။
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှာ မီးလောင်ကျွမ်း မှုကို စတင်သိရှိကြသည်နှင့် အိပ်ရာကု
တင်မှထက ကုတင်အခြေဒေါင့်ရှိရေသုံး ၆ လက်မခန့်သာမြင့်သည့် ရေလှောင် ကန်မှ ရနိုင်သမျှရေကိုယူကာ စောင်ကို ရေဆွတ်၍ ရေလှောင်ကန်ကို မှောက်နေ သော ဇနီးသည်အထက်မှ လွှမ်းခြုံသည်။ မီးအပူကိုရနိုင်သမျှ ကြိုးပမ်းသွားဟန်ဖြင့် မီးသတ်သူများ ဆိုင်ခန်းအလူမီနီယံတံခါး ကိုခွင့်ဝင်ရောက်ရှိလာချိန်တွင် အသက် ရှုမွမ်းကြပ် (အောက်ဆီဂျင်ပြတ်) သေဆုံး ကြရလေဟန် နှစ်ဦးထပ်လျက်တွေ့ကြရ သည်။ တွေ့မြင်ကြရသူများ မရှုရက်မမြင် ရက်၊ ၀မ်းနည်းဖွယ်အနိဌာရုံမြင်ကွင်းသာ ဖြစ်ရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ ပ-၉၁/၂၀၁၂ ပြစ်မှုဆိုင် ရာဥပဒေပုဒ်မ (၂၈၅)ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ရဲလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၀န်ထမ်းသက်သာရန်ပုံငွေဆိုင်ခန်း များ လက်ရှိကာလတွင် ၀င်ငွေကောင်း သောလုပ်ဆောင်မှုများအဖြစ်ဌာနအများ အပြားတိုးတက်လုပ်ကိုင်လာနေကြဖြစ် ရာ ရနိုင်သမျှဧရိယာကျဉ်းကျဉ်းတွင် စနစ်မကျသောခန်းဖွဲ့မှုများကြောင့် ယခု ကဲ့သို့ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရသည်ဟု အများ ပြည်သူကသုံးသပ်ပြောကြားလျက်ရှိသည်။ အခန်းဖွဲ့မှုအခြေအနေအရ ဘေးဝဲယာပြု တင်းပေါက်မရှိသော်လည်း နောက်ခြမ်း နံရံတွင်မူ ပြုတင်းပေါက် (အရေးပေါ် အပေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်) ရှိသင့်ပါသည်။ (အနောက်ဘက်နံရံမှာ ဌာနဆိုင်ရာဝင်း တံတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုထား၍ လုံခြုံမှု အရ ပိတ်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။)
လားရှိုးမြို့တွင် (အခြားမည်သည့်မြို့ တွင်မဆို) ၀န်ထမ်းဆိုင်ခန်းများဖြင့် ဌာန ဆိုင်ရာများ ၀င်ငွေကောင်းကြပါသည်။ သိန်းရာချီရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အား/ ကာဆိုင်ခန်း၊ ရဲစခန်းဆိုင်ခန်း၊ ယခုမီး လောင်မှုဖြစ်သော မန်ဆူဘုရားကြီးဆိုင်
ခန်းများရှိနေပါသည်။ ၀င်ငွေကောင်းကြ သော ဆိုင်ခန်းများလည်းဖြစ်ပါသည်။ အလားတူမြို့တွင်းလူစည်ကားရာ အကွက်အကွင်းကောင်းရာတွင်ရှိကြသော ဌာနဆိုင်ရာရုံးခန်းများလည်း အများအပြား ရှိနေပါသည်။
ဌာနဆိုင်ရာဆိုင်ခန်းတိုင်းသည် ရုံး ၀င် ဌာပိုင်မြေနေရာကို ၀ိုင်းပတ်စည်းခြား ထားသော တံတိုင်းနံရံများအဖြစ်တည် ဆောက်ထားကြရသည်ဖြစ်ရာ ယခုကဲ့သို့ မီးလောင်မှုများကလိုအပ်ချက်ကို မီးမောင်း ထိုးပြသကဲ့သို့ရှိနေပါသည်။ ဥပမာဆိုလျှင် ရဲစခန်းတိုက်တန်းဆိုပါက ဆိုင်ခန်း
အနောက်ခြမ်းနံရံသည် ရဲစခန်း၏စည်းရိုး၊ အုတ်တံတိုင်းဖြစ်၍ ပြတင်းပေါက်ထား ရှိပါက လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မည်သာဖြစ် သည်။ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ပြတင်းပေါက် ထားရှိခွင့်ပြုမည်မဟုတ်၊ ခန်းဖွဲ့မှုပုံစံအား နည်းသည်ဟူ၍ တည်ဆောက်မှုအင်ဂျင် နီယာများကို အပြစ်ပုံချမရနိုင်ပါ။ အလုပ် အပ်နှံသူ၏လိုအင်ဆန္ဒအရ တည်ဆောက် ကြရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သိုိ့ဆိုလျှင် မည်သို့လုပ်ကြပါမည်နည်း။ မသိကျိုးကျွံနေကြမည်သာဖြစ်သည်။ ၀န် ထမ်းဆိုင်ခန်းမရှိစေရဟူ၍လည်း (ယခင် ကအသံထွက်ခဲ့ဖူးသော်လည်း) ယခု အချိန်တွင်
မည်သူမျှပြောကြမည်မဟုတ်၊ အဘယ်ငမိုက်သားသည်ဤကဲ့သို့ပုံမှန်ရွှေ ဥပေးသော ငန်းမကြီးကိုသတ်ကြပါမည် နည်။
သို့ဖြစ်ရာ ဤသို့မီးမောင်းကြီးဖြင့် (၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်အနိဌာရုံဖြင့်) ထိုး ပြနေသော သင်ခန်းစာကို မမြင်ယောင် ပြုကာ ““နောင် ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်
ကြ”” ဟူ၍သာ အထက်ပုဂ်္ဂိုလ်များက ညွှန်ကြားကြရန်ရှိကြောင်းပါ။
Hot News သစ်ထူးလွင်
4/18/2012 05:21:00 PM
နော်နိုရင်း DVB ၁၈ ဧပြီ ၂၀၁၂ အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လည် နေရာချထားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် မြ၀တီမြို့နယ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတွေ ဒီနေ့မနက်က ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြ၀တီခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်တင်နဲ့ အစိုးရဌာနပေါင်း ၁၄ ခုက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ မြ၀တီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကလိုထူးဘော ကရင်အစည်းအရုံး (ကေကေအို)ရဲ့ ထိန်းချုပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ ဝေါ်လေနဲ့ ချူးကလိ ဒေသဘက်မှာ ကွင်းဆင်းလေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ တာဝန်ပေးချက်အရ ခုလို ကွင်းဆင်း လေ့တာတာဖြစ်ပြီး ဒီမနက်ပိုင်းမှာ ကေကေအို အခြေစိုက် ဆုံစည်းမြိုင်မှာ သွားရောက်ပြီး ကေကေအို တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မြ၀တီခရိုင် တာဝန်ရှိသူတွေ လာရောက် တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေကေအိုအတွင်းရေးမှူး စောဂုဏ်အောင်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။ “သူတို့ပြောတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းက လူတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လက်ခံဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့က ဝေါလေနဲ့ ချူးကလိဘက်မှာ ပြန်ပြီး နေရာချထားပေးပေမယ့်ဟာကို ကျနော်တို့ဆီလာပြီး ဘယ်နေရာချထားပေးရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးတာပေါ့။
ကျနော်တို့ကတော့ ဒီဥစ္စာက ကျနော်တို့ လုပ်ပိုင်ခွင်ထဲမှာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကေအန်ယူတို့၊ ကေအာရ်စီတို့၊ ဒုက္ခသည်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အန်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်းတွေရယ်၊ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေ၊ ယူအန်အိပ်ခ်ျစီအာက အရာရှိတွေ အစရှိသူတွေ အားလုံးနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ဆွေးနွေးပြီးမှ ဒါက လုပ်လို့ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ အဓိကတော့ ဒုက္ခသည်တွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလားနဲ့ စိတ်အပူအပင်ကင်းစွာ ပြန်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့က ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။” တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး ညနေပိုင်းမှာတော့ ဦးမြင့်တင်နဲ့အဖွဲ့ဟာ ဝေါ်လေကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ညအိပ်ပြီး မနက်ဖြန်မှာ ချူကလိဘက်ဆက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက် သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ စောဂုဏ်အောင်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ တိုက်တွန်းတာ မရှိသလို ပြန်ဖို့လည်း အစီအစဉ် မရှိတဲ့အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရှိရင်တော့ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ဖို့ အနေအထားရှိတယ်လို့ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း ဥက္ကဋ္ဌ စောထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။ “နယ်စပ်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ မရှိတော့ဘူး။ တစုံတရာထိ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖို့ အနေအထားတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည် ပြန်ဖို့ စတင် ဆွေးနွေးနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ၊ နေရပ်ကို ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနိုင်ဖို့ အခြေအနေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ့် စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရရှိနိုင်မယ့် အချိန်၊ ရရှိနိုင်မယ့် လမ်းစတွေ
မြင်လာမယ်။ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိလာမယ့် အချိန်လောက်မှပဲ ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ်တွေ စတင်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်နေ ဒုက္ခသည်တွေကို ပူးပေါင်းကူညီပေးနေတဲ့ (တီဘီဘီစီ)အဖွဲ့ရဲ့ စာရင်းအရ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည် ၁သိန်းခွဲခန့် ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
4/18/2012 05:17:00 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နော်ဝေသံတမန်ရုံး ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာခင် နော်ဝေသံတမန်ရုံး ဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိကြောင်း
အော်စလိုမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာ အစိုးရ ငြိ်မ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရထားဝန်ကြီး ဥိးအောင်မင်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့
ဧပရယ်လ ၁၇ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက် ဥိးအောင်မင်းက အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံရာမှာ ဥိးအောင်မင်းက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိ်မ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စကို အဓိကထားရှင်းပြခဲ့ပြီး နော်ဝေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်း မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အနီးကပ် ကူညီသွားမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။
18 April 2012 - ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲတခု ဒီနေ့နှစ်ဆန်း ၂ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ၊ ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးစတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့ချုပ် သက်ကြီးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့
ဦးအောင်ရွှေ၊ သူရဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်(ဟံသာဝတီ)၊ ဦးလှဖေ၊ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးညွန့်ဝေ စသူတို့ကို မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁
သောင်းစီနဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ကန်တော့ခဲ့ကြတာပါ။
4/18/2012 04:54:00 PM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမည့်ဇွန်လတွင် နော်ဝေနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ် မည်
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံး ပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် လာမည့်ဇွန်လတွင် နော်ဝေနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ် မည်ဖြစ်ကြောင်း အေအက်ဖ်ပီနှင့် ရိုက်တာသတင်းဌာနများက သတင်းဖော်ပြသည်။
သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့သို့ လာမည့်ဇွန်လတွင် လာရောက်လည်ပတ်မည့် ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားကြောင်း အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနက သတင်းဖော်ပြထားသည်။
နော်ဝေအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ပါသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း NLD မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကို
ကိုးကား၍ ရိုက်တာသတင်းဌာနကလည်း သတင်းရေးသားထားသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် လာမည့်ဇွန်လ၌ ဗြိတိန်လို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်က ထိုသို့ဖိတ်ကြားပါက ဖိတ်ကြားသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်သည်ဟုသာ ပြောနိုင်ပြီး မလာနိုင်ဟု ပြန်ဖြေမည်ဖြစ်ကာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ခရီးစဉ်မှာဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ NLD မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးသို့ 7Day News က ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်(Passport)လျှောက်ထားကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
7Day News သစ်ထူးလွင်
4/18/2012 04:45:00 PM
မုံရွာမြို့ မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ည က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါး
ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့ ၂၀၁၂
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့ မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် ည ၉ ခွဲလောက်မီးလောင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအနီး ဘုရားကြီးရပ်ကွက် တရုတ်တန်းလမ်း အဝင် မှာလောင်တာပါ။
မြင်းပျံ ဘီစ ကစ် ဆိုင် တော့ ပါသွားပြီး တစ်နာရီ နီးပါးအတွင်း မီးညိမ်းသွားရဲ့နှစ်ဆန်း ၁ရ က် နေ့ မှာ မီးလောင် လို့မကောင်းဘူး လို့ဆို ကြပေမဲ့သတ္တဝါ အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အား လုံး ယုံကြည် ရာ ဘာသာတရား စွဲ မြဲ နိုင်ပါစေ။
Heinminhtet Htet (Facebook) ဓါတ်ပုံ-ပေတရု မုံရွာမှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက် ည ၉ ခွဲလောက်မီးလောင်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအနီး ဘုရား ကြီးရပ်ကွက်တရုတ်တန်းလမ်း အဝင် မှာလောင်တာ။
ဒါ ကတော့မီးလောင်ချိန်မှာ မီးသတ်ကားနောက် ကျ လို့ခဲ နဲ့ ထု လို့ မီးသတ် ရဲဘော်တစ်ဦး သတိလစ်သွား လို့ဆိုက်တွဲနဲ့ ဆေးရုံပို့ လိုက်ရတဲ့ ပုံ ပါ
4/18/2012 10:23:00 AM
စကြားကြားချင်းကတော့ အတော့်ကို အားတက်စရာ သတင်းပါဘဲ... ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း အများနည်းတူ ကဒ်စံနစ်ဖြစ်ပြီပေါ့။ အဓိပတိအပြာလိုင်းမှာဘဲစမ်းသပ်တပ်ဆင်မယ်ဆိုတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်။ ဘာလို့ရှိသမျှ မ.ထ.သ လိုင်းအားလုံးတစ်ပြေးညီ မတပ်ဆင်တာလဲလို့....
ညက youtube က MRTV4 channel မှာ ကြည့်ရတော့မှ တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။သူတို့လုပ်မယ့်စက်က ဒီလိုဟာမျိုးတဲ့ဗျာ..ဒီလို စက်မျိုးသာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကားစံပါယ်ယာတွေ တော်တော်ဒုက္ခရောက်မယ့်အမျိုး...ကဒ်ကို လုပ်နေတာနဲ့တင် မှတ်တိုင်တစ်ခုတစ်ခုကနေ ဘယ်လိုထွက်တော့မတုန်း.? အထူးသဖြင့် busy hour (ရုံးဆင်းရုံးတက်ချိန်မှာ)
သူများတွေဆီမှာက အဆင်ပြေအောင်လို့ RFID( radio frequency identification ) contactless စံနစ်၊ ဒီ iPay ဆိုတာက contact စံနစ်
ထူးထူးဆန်းဆန်း အမည်မှည့်ခေါ်ထားသော iPay ကဒ်ဖတ်စက်။ ကျသင့်သည့်ပမာဏကို စက်တွင်ပုံပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပြီး၊ စက်ညာဖက်မှ မြောင်းတွင် ကဒ်၏ magnet line အားပွတ်ဆွဲ၍ ကျသင့်ငွေအားနှုတ်သောစံနစ်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ဈေးဝယ်သည့်နေရာ၊ တက္ကစီခရှင်းသည့်နေရာတို့တွင်သုံးသည်။
ဒီလိုမျိုးမှ မဟုတ်ပဲဗျာ.... အခုဟာက ဈေးဝယ်ကဒ်လိုမျိုးကဒ် ။ မနက်၊ညနေ busy hour မှာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? မ.ထ.သ နဲ့ ဦးပိုင်က ပုဂိုလ်တွေ တကယ်ဘဲ
မသိတာလား...သိလျက်သားနဲ့ ခွင်ရိုက်တာဘဲလား.... ဒါမှမဟုတ် နားမလည်ပါးမလည် ခွင်ထဲဝင်လာတဲ့ သူကို ရိုက်စားလုပ်တာလား...မေးခွန်းတွေ တသီတတန်းနဲ့ ဒီပို့စ်ကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် တင်လိုက်ပါတယ်။ ထိုဂွင်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတ်သက်နေသော လူကြီးမင်းအပေါင်း..ကျနော့်အား စိတ်ရှိလက်ရှိမုန်းကြပါကုန်....
Bus ကားခကို ကောက်ခံသည့်စက်
ဘတ်စကားပေါ်သို့ အတက် ပိုက်ဆံအိတ်(သို့) လက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ထားသော်လည်း စက်ကို အိတ်နှင့်ကပ်သည်နှင့် စက်ကသိရှိမှတ်သားနိုင်သည်။
လူတက်တာနဲ့ ကဒ်ကို ပုံပါအတိုင်း စက်တွင်ကပ်လိုက်ရသည်။ ထိုအခါ စက်ကလက်ရှိတည်နေရာကိုမှတ်သားသည်။ LCD မော်နီတာအောက်တွင် အချက်ပြမီး (၃)ခုရှိသည်။
ကဒ်တွင်ငွေအလုံအလောက်ရှိပါက ကဒ်ကို မှတ်သားပြီးသည်နှင့် အသံတစ်ချက် မြည်ကာ မီးစိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံလက်ကျန်နည်းနေပါက အ၀ါရောင်မီးပြကာ မြည်သံ(၃)ချက်ပေးသည်။ မော်နီတာပေါ်တွင်လည်း Top up your card (ငွေထပ်ဖြည့်ပါ) ဟု စာသားပေါ်မည်။
ပိုက်ဆံသည် ယခုသင်စတက်သောနေရာမှ ခရီးစဉ်အဆုံးထိ စီးနင်းရန်မလုံလောက်လျှင် မီးနီလင်းကာ အချက်ပေးသံ(၅)ချက် ထပ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ယာဉ်မောင်းမှ သင့်အား ငွေမလုံလောက်ကြောင်း၊ ပိုက်ဆံပေးစီးရန် အကြံပြုလိမ့်မည်။ သွားမည့်ခရီးကို ယာဉ်မောင်း(Bus Captain) အားပြောပါ။ ကျသင့်ငွေကို တွက်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ကျသင့်ငွေကို အကြွေစေ့ထည့်စက်သို့ထည့်ပါ။ သင့်အား စလစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုလက်မှတ်ခဖြတ်ပိုင်းအား ကားပေါ်မှ မဆင်းမချင်း ထိန်းသိမ်းထားပါ။ လက်မှတ်စစ်တက်လာလျှင် ထိုဖြတ်ပိုင်းအားပြပါ။
အဆင်းပေါက်(နောက်ဘက်အပေါက်)တွင် ကဒ်အားစက်တွင် ကပ်ရပါမည်။ ထိုအခါ စက်မှ ကျသင့်ငွေအား နှုတ်ပြီး မော်နီတာပေါ်တွင် လက်ကျန်ပမာဏအား ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင်းတွင်ကဒ်ရိုက်ရန်မေ့လျှင် သိပ်ပြဿနာ မရှိပါ။ ခရီးစဉ်အဆုံးမှတ်တိုင်အထိတွက်ပြီး ငွေဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
အောက်နားရှိ အဖြူရောင်ပုံးငယ်မှာ အကြွေစေ့ထည့်စီးသူများ၏ လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းစွန့်ပစ်ရန်ပုံးဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များတွင် ဘတ်(စ)ကားစီးသည့်ကဒ်ဖြင့် ငွေရှင်းနေစဉ်
ဘတ်(စ)ကားခ ပေးရာတွင်သုံးနိုင်သလို ရထားခပေးရာတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ စင်္ကာပူ ဟောင်ကောင်တို့တွင် ဘတ်(စ)ကား နှင့် ရထားမှာ operator (ကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲသူ) တစ်ဦးတည်းဖြစ်ရာ ရထားနှင့်ကားကို ဆက်တိုက်ပြောင်း၍ စီးသွားလျှင် ကနဦးကျသင့်ငွေကို စုစုပေါင်းတွင်ပြန်နှုတ်ပေးပါသည်။ ကိုရီးယားတွင်လည်းထို့အတူပင်ဟု သိရပါသည်။
ထိုကဒ်ကိုပင် taxi ခပေးရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 7-11 stores တွင်လည်းဈေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
ထိုကဒ်ကိုပင် အလိုအလျောက်အခပေး ကားပါကင်များတွင်လည်းကောင်း၊ ERP (electronic road payment) ဟုခေါ်သော ကားကျပ်သည့်နေရာများတွင် လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်စံနစ် တွင်လည်းကောင်း ၊ ကုန်တိုက်ကြီးများရှိ ကင်တန်း များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်စက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘတ်စကားကဒ်၊ ထိုစက်၊ထိုကဒ်ဖြင့် အလိုအလျောက် ကားခပေး ပါကင်များတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
ငွေဖြည့်တင်းသည့် စံနစ် Top-up Kiorsk...
ထိုကဒ်အား အထက်ဖော်ပြပါ ရထားဆိပ် ၊ ကားဂိတ်များရှိ top-up kiorsk များတွင်လည်းကောင်း၊
ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနများ၊ မြို့တော်တွင်းနေရာအနှံ့တွင်ရှိသော 7-11 stores
များ၊ ATM ငွေထုတ်စက်များ၊ smart phone များမှသော်လည်းကောင်း၊ ငွေပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်ပါသည်။ Online မှဖြည့်တင်း၍ ရသည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။( ကျနော်တော့ မလုပ်ဘူးပါ။)
by Thar Lay
4/18/2012 08:36:00 AM
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး စာရင်းထဲ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်
ကုလသမဂ္ဂ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အခြေပြ HDI ၂၀၁၁ ခုနှစ် ညွှန်းကိန်းမှာ
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ဆုံး စာရင်းထဲမှာ ပါရှိနေပါသေးတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အခြေပြ HDI ၂၀၁၁ ခုနှစ် ညွှန်းကိန်းဖော်ပြချက်
ကုလသမဂ္ဂက လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အခြေပြ ညွှန်းကိန်းပြုစုရာမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၇ နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို လေ့လာရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့် ၁၄၉ မှာရှိနေတဲ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း နည်းလွန်းတဲ့နိုင်ငံတွေ စာရင်းထဲမှာ ရှိနေသေးကြောင်း
ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်။
HDI ပျမ်းမျှခြင်း ညွှန်းကိန်းတစ်ခုရဖို့ အခြေခံတိုင်းထွာတဲ့ အချက် ၃ ချက်က-အသက်ရှည် ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်မှု၊ ပညာဗဟုသုတ ရှာဖွေဆည်းပူးနိုင်မှုနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း စတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံထက် အနည်းငယ်သာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ အိမ်နီးချင်း လာအိုနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်က လူတစ်ဦးခြင်းစီရဲ့
ပျမ်းမျှ အသက်ရှည် နေထိုင်နိုင်မှုဟာ ၅၅ နှစ်သာရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ ပျမ်းမျှ ၆၅ နှစ်အထိ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပညာသင်ကြားမှု နှစ်ကာလကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ထက် တဖြည်းဖြည်း သာလာသလို လူနေမှုအဆင့်အတန်းကို တိုင်းထွာတဲ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေအပိုင်းမှာလည်း များလာတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အစီရင်ခံစာက ဆိုထားပါတယ်။
4/18/2012 08:23:00 AM
ကေအိုင်အေတပ်သား ၃၅ ယောက် အစိုးရထံ လက်နက်ချ
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIAက အကြပ်တပ်သား ၃၅ယောက်က လက်နက်မျိုးစုံ ၂၃လက်နဲ့အတူ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်အတက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တာလောကြီးရွာမှာ အခြေချနေတဲ့ အစိုးရ တပ် စခန်းကို လာရောက် လက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေကတော့ ဒီလို လက်နက် ချလာ သူတွေ ဟာ KIAက အဓမ္မ တပ်သားသစ်စုဆောင်းခံရ သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လာ တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီး
KIA ဘက်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာမှာတော့ ဒီသတင်း မကြားသိသေးကြောင်း နဲ့ အတင်းအကျပ် ကောက်ယူတာ မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIAက တပ်ကြပ်ကျော်ဆန်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၃၅ယောက် ဟာ မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် တာလောကြီး ကျေးရွာမှာ အခြေချနေတဲ့ ခလရ ၃၇ တပ်စခန်းကို ဒီလ ၁၆ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း က လက်နက်ချဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ၀င်ရောက်လာသူတွေကို ခလရ ၃၇က ဒုရင်းမှုးက လက်ခံပြီး နေရာချထားပေးတယ်လို့ တာလောကြီး ရွာသား တယောက်က ပြောပါတယ်။
- သူတို့က သူတို့ကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ စစ်ကြောင်းမှုးကိုတော့ မပါလာဘူး။ သူက ကချင်လေ။ သူနဲ့ အပြန်အလှန်ဖြစ်ပြီးမှ သူတို့ တပ်စိတ်မှုးတွေပဲ အချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးမှ ဒီဘက် ထွက်ခဲ့ကြတာ။ သူတို့ ၃၅ယောက်။ လက်နက်မျိုးစုံ ၂၃လက်ပါတယ်။ အားလုံး အမှတ် ၃၇ သူတို့ တူးအိုင်စီကိုယ်တိုင် အဲဒီ ကိစ္စကို နေရာချထားပေးတယ်။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ။
ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာ ရှမ်း၊ ဗမာနဲ့ ကချင် လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။
အခုလို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာ သူတို့ စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ အမှုထမ်းရသူတွေဖြစ်တာကြောင့် ပြန် လာတာဖြစ်တယ်။ ဒီလို ပြန်လာတာကြောင့် သူတို့ ရွာလုံခြုံရေးထိခိုက်မှာလည်း စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ တာလောကြီး ရွာသားက ဆက်ပြောပါတယ်။
- သူတို့က KIA တွေ ပေါ်တာဆွဲပြီး ဖမ်းသွားတာတွေ၊ နောက်တခါ ဖိအားပေးပြီး စာနဲ့ ဆင့်ပြီး ခြိမ်းခြောက်ခေါ်ခံရသူတွေ၊ နောက်ဆုံး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဖမ်းအဆီးခံရတဲ့ ကလေးတွေ ချည်း ပဲ။ ပြဿနာတော့ ရှာမှာပဲ။ အရင့်အရင် ဒါမျိုးထွက်ခဲ့သူတွေကို မိသားစုကို ရန်ရှာတာတို့၊ သူတို့ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူကို ရန်ရှာတာတို့ အစဉ်အလာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလည်း ပြောလို့
မရဘူးလေ။ သူတို့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေ ဆိုတော့ ရှာဖို့တော့ များပါတယ်။ အစိုးရက ဘယ်လောက်ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင် မလဲ ဆိုတော့ ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာတော့ တာဝန်ယူကာကွယ်လို့ မရပေမဲ့ ကျေးရွာ တခုလုံး လုံခြုံမှုကိုတော့ အမှတ် ၃၇ ကနေ တာဝန်ယူပြီး စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIOက ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတွေကို ဆက်သွယ်ရာ မှာတော့ ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ မရခဲ့ပါဘူး။
KIA အဆင့်မြင့် အရာရှိတယောက်ကတော့ လက်နက်ချတဲ့သတင်းကို အတိအကျ မသိ ရသေးကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒေသခံတွေ ပြောသလို KIA က အတင်းအကျပ် စစ်သား စုဆောင်း ကောက်ယူ သလား ဆိုတာကိုတော့ KIA အရာရှိက အခုလို ဖြေပါတယ်။
- မူဝါဒတော့ အဲလို မရှိဘူး။ ဒါမျိုးတော့ မရှိဘူးလေ ကျနော်တို့က။ ဟိုဘက် ရောက်သွားရင်တော့ အဲလိုပဲ ပြောရမှာပေါ့ကွာ။ အဲလို မပြောရင်တော့ သက်သာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။
လောလောဆည်မှာတော့ ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်ဒေသ၊ မိုးမောက်ဒေသနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘက်တွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
KIA နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်တွေအကြားမှာ ၁၇နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ရာက တိုက်ပွဲတွေ ပြန်လည် စတင် နေတာ အခုဆိုရင် ၁၀ကျော်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတိုက်ပွဲပြန်စခဲ့တဲ့ အစောပိုင်း ၂လတာ ကာလအတွင်းမှာ အစိုးရတပ်တွေက အမျိုးသမီးနဲ့ မိန်းကလေး ငယ် ၃၇ ယောက်ကို အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး ၁၃ယောက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေကတော့ KIA အဖွဲ့တွေက လမ်း၊ တံတားတွေ၊ မီးရထားသံလမ်းတွေကို မိုင်းခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြောင်း နဲ့ အဓမ္မ လူသစ်ကောက်ယူစုဆောင်းနေကြောင်း သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ လောလောဆည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခသည် ၆သောင်းလောက် ဟာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့ကြီးတွေနဲ့ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသဘက်တွေကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေ ရ ပါတယ်။
KIO ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေအကြားမှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ အနည်းဆုံး ၃ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့ ဒီကနေ့အထိတော့ မအောင်မြင်သေးပါဘူး။
By မိုးဇော် (ဗွီအိုအေ) သစ်ထူးလွင်
4/18/2012 05:23:00 AM
မြန်မာ့အရေး အိန္ဒိယအကြံပေးချက် အမေရိကန် ချီးကျူး
လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell(ဓါတ်ပုံ-Google Images)
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရဲရဲတင်းတင်း ဆောင်ရွက်လာတာကြောင့်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့လည်း မြန်မာအပေါ် အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုအချို့ ရုပ်သိမ်းတာ အပါအ၀င် အပြုသဘော တုံ့ပြန်ချက်တွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ စီစဉ်နေပြီလို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kurt Campbell က ပြောဆို လိုက်ပါ တယ်။ ၅ကြိမ်မြောက် India US Dialogue ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်နေတဲ့ Mr.Campbell က သတင်းထောက်တွေကို ပြောသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို အလည်အပတ် လာရောက်ဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ် ထားတဲ့ အပြင်၊ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာကိုလည်း ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းဖို့ရှိတယ်လို့
Mr.Campbell က ပြောပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရရဲ့ သတ္တိရှိရှိ ရဲရဲ တင်းတင်း ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အခုလို ဆက်ဆံရေး ထူထောင် လာတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ မြန်မာ့အရေးကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မလဲလို့ သုံးသပ်တဲ့အခါမှာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတွက် လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တုန်းက မြန်မာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတိုက်အခံ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နေရာအားလုံးနီးပါး အနိုင်ရခဲ့တဲ့နောက်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကလင်တန်ကိုယ်တိုင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး မြန်မာအပေါ် ဒဏ်ခတ်မှုအချို့ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း ပေးမယ့် အကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေ နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့် မသွားဖို့နဲ့၊ ပြောင်းလဲမှုအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ အရေးယူမှု တွေ ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
By ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း (ဗွီအိုအေ) သစ်ထူးလွင်
4/18/2012 05:20:00 AM